Kala war la’aanta Waayaha Tigreyga iyo wacyiga Da’yarta Somalida | Berberanews.com
Home QORMOOYIN Kala war la’aanta Waayaha Tigreyga iyo wacyiga Da’yarta Somalida
Kala war la’aanta Waayaha Tigreyga iyo wacyiga Da’yarta Somalida
” quruxdayaanu leenahay..
Ma rag qaarado kale jira baa’
Noo qoray ilaahay”.
Caduur dhow-dhowdu uma dhacsana . Hal celinta dumarka waxa iyada lafteeda ku lamaan mararka qaar Isku dey u eg ” annag iyo hooyadayaba lama g–din. Waxay dhankooda soo qotominayaan rag u eg innamada dharka iyo huga u suuqgeeya dukaamada waawayn ee Dolce&Gabon, shirkadda Addidas iyo dhigeeda Puma.
Hase ahaate,marka dhanka kale laga eego waa arrin werwer keeda leh, wa arrin ku tusinaysa halka da’yarta Somaliyeed maanta Wacyigoodu taagan yahay, waana calaamad dibu-udhac oo khatarteeda keenaysa sanadaha soo socda.
Hagaag, hilaadi qarinigii tagay dabayaaqadiisi,Somalida waxaa ka burburay dowladdi dhexe. Somalidu waxay mar qudha noqdeen bur iyo baaba’ .
Nin walba waxa uu u dhaqaaqay jahada ku beegantay. Dunida dacaladeeda waxa mar qudha gaaray dhiilada Somalida ku habsatay. Qaxoonti,barakac, xasuuq, macaluul, dagaalo soeeye, dhaqaale burbur iyo Cururada faafaya ayaa waagaa si ba’an u sameyeey Somalida.
Garaadka dhalinyarada Somalidu badiba waxa uu is-dhaafinaya ama ka arrin la’yahay in dhaawaca gaadha bogcad Ka mida dhulka geesku noqon karto dab-iyo gaas laysku daray.
Sida ay sheegayso warbixin uu daabacay Nial Ferguson oo ah xeel-dheere dhanka amniga iyo colaadaha ee Geeska Afrika, “in ka babadn 1500 oo qalelaase ayaa ka dhacay geeska Africa” .
Maqaalkani sinaba uguma garnaqayo colaadda ka dhex aloosan Xabashida, sidoo kale dhinac saari maayo, kumana cadaynayo sax, same iyo sirgaxnaan dhinaca ku ah ama dhinaca ka ah colaada. Waxuuse khuseeyaa kaliya wacyiga Dhalinyarada Somalida iyo kala war hayn la’aanta waayaha dhalinyarada Tigraaya.
wacyiga Da'yarta Somalida
Previous articleHargeysa: Aas-wadareed qaran oo loo sammeeyay Marxium C Carte iyo Suldan Indhacase
Next articleItoobiya oo waaran u jartay 76 Sarkaal iyo xaaladda Gobolka Tigree